के सडक र पुलमा तगारो आबस्यक हो ?::Nepali News Portal from Nepal
के सडक र पुलमा तगारो आबस्यक हो ?
मानवअधिकारको दृष्टिकोणले पनि यो काम शोभनीय भएन
लकडाउन सफल बनाउन भन्दै मुस्ताङका युवाले सडकमा लगाएको तगारो । फाईल तस्विर
बागलुङ,६ बैशाख– गाईबस्तु छिर्न नदिन गाउँघरमा तगारो राख्ने चलन छ । खेतीपाती जोगाउन पनि बारबन्धन गर्ने चलन नौलो होइन । तर बागलुङमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका दुई जना भेटिएपछि छिमेकी जिल्लामा बागलुङप्रतिको डर बढीनै भएको देखियो ।
बाहिर गएपनि बागलुङको मानिस भन्ने र फरक व्यवहार गर्ने चलन उत्तिकै छ । पोखरामा ¥यापिड टेष्टमा एकजनाको पोजेटिभ देखिएपछि धेरैले सामाजिक संजालमा समेत बागलुङकै भएको आशंका भनेर लेख्ने भेटिए । तर स्वाब परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएपछि को थियो, कहाँको थियो भन्ने कुरा गुमनाम भयो ।
बागलुङमा भेटिएका दुई संक्रमित बिदेशबाट आएका थिए । बिदेशबाट आएपनि आफ्नै ढंगले घरघरमै बसेकोले उनीहरुबाट अर्कोमा संक्रमण भएको पुष्टी भएन । ¥यापिड टेष्टमार्फत १ हजार जनाको परीक्षण गर्दा पनि कोही पोजेटिभ भेटिएनन् । काठेखोलामा एकजना शंकास्पद भएपनि स्वाब परीक्षणले नेगेटिभ भएको देखायो । त्यसपछि अब बागलुङप्रति डराउनु पर्ने अबस्था छैन ।
बागलुङस्थित धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराएका दुईमध्ये एक जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेको छ । दिनचर्या र स्वास्थ्यको अबस्थाले अर्की युवतीको पनि नेगेटिभ आउने अस्पतालमा कार्यरतहरु नै आशाबादी छन् । तर बागलुङ आउने केही नाकाहरुमा अहिले पनि तगारो राखिएको छ । तगारो पनि सामान्य खोल्न लगाउन मिल्ने हुन्छ । तर बागलुङ आउने झोलुंगेपुल बार लगाएर ठप्प पारिएको छ । पर्वततर्फ जोड्ने उक्त झोलुंगेपुलबाट बागलुङ बजारमा दैनिक तरकारी आउने गरेको थियो । अहिले आउनै छाडेको छ । बलेवास्थित अग्ला पुल पनि बन्द छन् । जसले गर्दा अत्यावस्यक सेवाका लागि पैदल हिड्नेले पनि सास्ती खेपेका छन् ।
बागलुङकै कुँडुलेदेखि म्याग्दी जाने सडकको पक्की पुलमा रुख ढालेर अबरुद्ध पारिएको २० दिनबढी भैसकेको छ । यो सडकमा पैलदयात्री मात्र नभइ सवारी साधन पनि रोकिएका छन् । बागलुङमा कोरोना भाइरस संक्रमणका दुइजना भेटिएपछि छिमेकी जिल्लातर्फ जाने गरी सडकै अबरुद्ध पारिएको हो । स्थानीयले रोकेपछि यी दुइ बाटोमा आकस्मिक काममा हिंडेकाले पनि यात्रा गर्नसकेका छैनन् । पक्की सडकको पुलमै रुख ढालेर एम्बुलेन्स पनि जान नमिल्ने गरी सडक रोक्न नहुने मानवअधिकारकर्मी राम शर्माले बताए । ‘कोरोना संक्रमण रोक्ने हामी सबैको काम हो, तर दुर्घटना र अन्य आकस्मिक समस्या पर्दा एम्बुलेन्स हिड्न नमिल्ने गरी अबरुद्ध गर्नु राम्रो होइन’ शर्माले भने, ‘मानवअधिकारको दृष्टीले पनि यो काम शोभनीय भएन ।’ लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने भने उनले सुझाए ।
उक्त पुलहरु अबरुद्ध भएको थाहा पाएपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख नवराज भट्टले लकडाउन भनेको बाटो रोक्दै हिड्ने काम नभएको सामाजिक संजालमा समेत लेखेका छन् । ‘उद्दारका लागि प्रहरीनै हिड्नुपर्दा समेत सडक पाईएन भने के गर्ने’ उनले प्रश्न गरेका छन् ‘हरेक नागरिक आफ्नो सुरक्षाका लागि घरमा बस्ने बेला हो ।’ एक सातादेखि भने एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा पैदलयात्रा गर्न पनि नदिने भन्दै कतिपय स्थानमा गाउँका गोरेटा बाटोमा पनि रुख ढालेर तेर्साएका छन् । बाटो रोकेको गाउँकै युवाहरुले सामाजिक संजालमा पनि राख्ने गरेका छन् ।
लकडाउन भएपनि सरकारी संयन्त्र तथा केही व्यपारिक प्रतिष्ठानले दैनिक उपभोग्य सामाग्री शहर र गाउँ पठाएका छन् । तर सडक अबरुद्ध गरेको थाहा पाएपछि कतिपयले सामान पठाउन नमानेको उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव नरेश कंडेलले बताए । ‘राहत बाँड्न जाने टोली र अत्यावस्यक सामाग्री ढुवानी गर्ने सडक रोक्न नहुने हो’ कंडेलले भने, ‘यो आत्तिने बेला होइन, संयम र सुरक्षित बन्ने बेला हो ।’ ¥यापिड टेष्टका लागि स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले पठाएको टोली जाने क्रममा पनि ढुंगा र मुढा पन्छाएर जानु परेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । ‘हामीले तीनचार ठाउँमा बाटो पन्छाएर मात्र गयौं’ क्षय कुष्ट सुपरभाइजर देवप्रकाश घिमिरेले भने, ‘उपचारका लागि गएको टोली पनि चोर र अपराधीजस्तो मान्ने क्रम बढेको रहेछ ।’
मुख्य राजमार्गमा भने प्रहरीकै टोली बसेर चेक गर्ने गर्छ । जिल्ला प्रवेशद्वार रहेको मालढुंगा, छिस्ती, निसीखोला, खरवाङ लगायतका स्थानमा भने प्रहरीले चेक गरेर मात्र सामान भित्राउन अनुमति दिन्छ । ‘तोकिएको पत्र, व्यक्ति र सवारी साधन भएकोलाई परीक्षण गरेर पठाउने गरिएको छ’ भट्टले भने, ‘यसले जिल्लामा कति सामान भित्रियो, कसरी बितरण गर्ने भन्ने योजनामा पनि सहयोग मिलेको छ ।’ पास बितरणभन्दा आवस्यकताको आधारमा मात्र पठाउने नीति लिएको उनले बताए । स्वास्थ्यकर्मी, संचारकर्मी लगायतले अत्यावस्यक काम पर्दा आफ्नो परिचयपत्रको आधारमा प्रवेश दिइएको उनले जानकारी दिए ।
मंगलवार मात्रै ९० जना कोरोना संक्रमित थपिए